को सुटकेश लागि कभर कसरी सी गर्न? तपाईं यसलाई गर्दा विचार गर्न आवश्यक छ के?
म सुटकेश लागि कभर किन चाहिन्छ? सबै को पहिलो, त्यसपछि, सडक मा सुटकेश को दूषण जोगिन, बाहेक, प्रकरण उहाँलाई अचानक खोल्न अप गर्न अनुमति छैन। तपाईं यात्रा फैशनेबल सुटकेश अघि, तर विक्रेता आफ्नो भण्डारमा यस्ता कुराहरू बिक्री को लागि छैन कि जवाफ एक मामला बारेमा तपाईंको प्रश्न गर्न खरिद गर्नुभएको छ भने, चिन्ता छैन। तपाईं आवरण कुनै पनि सिलाइ पसल tailoring आदेश वा आफैलाई बनाउन सक्छ। निम्न यसलाई कसरी गर्न विस्तृत वर्णन गर्दछ।
को सुटकेश लागि कभर कसरी सी गर्न?
सबै को पहिलो, ध्यान दिएर मामला जाँच्न। तपाईं pockets आवश्यक हुनेछ कि विचार? को ह्यान्डलहरू र पाङ्ग्रा लागि "विन्डो" बारे पनि बिर्सन हुँदैन। तिनीहरूले खुला रूपमा गर्न सकिन्छ (अर्को शब्दमा, यो बस कट-बहिष्कार को किनाराको मा उपचार गरिनेछ) र बन्द (यस मामला मा तपाईं वाल्व बनाउन, र हुलाकी वा टास्ने टेप प्रयोग छ)। को पाङ्ग्रा लागि (यो अवस्थित छ भने निस्सन्देह,) केन्द्रीय ह्यान्डल खल्ती लागि पार्श्व ह्यान्डलहरू लागि त्याग दिन योग्य कलम खल्ती लागि उल्लेख हुन सक्छ जो एक जेब को मुख्य तत्व र Windows रूपमा।
हामी मोडेल निर्धारण
सूटकेस लागि प्रकरण सी जाँदै? यसको भविष्य मोडेल परिभाषित। शीर्ष तल वा (overalls रूपमा) बीचमा मा सिलना जिप प्रयोग (उनको टाउको माथि पोशाक धारण कसरी गर्ने जस्ता) बाट - यो लगाउने तपाईं कसरी जाँदैछन्। पहिलो विकल्प बनाउन धेरै सजिलो छ, त्यसैले यसलाई हामी केन्द्रित हुनेछ। उदाहरणका लागि, सुटकेश तल चार वाल्व, दुई साना (संपर्क गर्न टेप) र दुई ठूलो (जिप) छन्।
त्यसैले, हामी सुटकेश लागि कभर सी। सुरु गर्न, यो एउटा चिन्ह बनाउन र माप हटाउन। यात्रा बैग को सबै भन्दा मोडेल गोलो कुना छ। त्यसैले, तपाईं माप लिन बनाउन, (तपाईं मास्किंग टेप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ) सुटकेश पातलो स्ट्रिप्स मा पेस्ट - त्यसैले तपाईं भविष्यमा विवरण demarcate। अब "फारम हटाउन" धेरै सजिलो हुनेछ।
सूटकेस कवर आवश्यक नमुना को उत्पादन - यो कागज वा कपडा गर्न सकिन्छ। उपाय हटाउन र आरोप आवरण मोडेल मा ढाँचाको सिर्जना आधारित छ।
तपाईं एक परीक्षण मोडेल सी राम्रो सुरु गर्न पर्याप्त समय छ भने, यो सबै कुरा सही पहिलो पटक बाहिर हुनेछ भन्ने तथ्यलाई छैन। तपाईं एक वास्तविक उत्पादन हुँदा, तपाईं आँखा अघि सबै आवश्यक समायोजन को डिजाइन बनाउन सक्छ। यो मस्यौदा संस्करण केही सरल, सस्तो कपडा लिन राम्रो छ लागि भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। सबै आकार पालन गर्न - एउटै यसलाई छैन आवश्यक छ, मुख्य कुरा समयमा सबै विवरण ध्यान दिएर ह्यान्डल।
सबै प्रिपेरेटरी चरणहरू पूरा गरेपछि, तपाईं अन्तमा बाहिर कटौती र झोला सुटकेश सार्वभौमिक सी गर्न सक्नुहुन्छ। सल्लाह को एक शब्द: को गद्दी पलिएस्टर सबै विवरण नक्कली - यो कोमलता र अतिरिक्त मात्रा को एक मोडेल दिनेछु। धीरे seams, pockets र फास्टनरों हटाउन; उत्पादन विशेष गरी उच्च वेयर प्रतिरोध फरक पर्छ भनेर नबिर्सनुहोस्। को अस्तर मा seams लुकाउन pockets slotted गर्नुहोस्। जबकि राम्रो बिजुली "ट्रयाक्टर" र "सर्पिल" पनि उच्च-बल मुद्दा प्रयोग गर्न आवश्यक लिन।
लुगा धुने पाउडर Burti: चयन, संरचना, समीक्षा
Sheeting वा Poplin: यो चयन गर्न राम्रो छ?
एल्यूमीनियम डिब्बे - लागू संभावना
कोरस पोशाक - एक लोकप्रिय मेला outfit
शिकार लागि राइफल्स
लुगा हाउते Couture - जीन्स मा कढाई
कसरी राम्रो तरिकाले मत्स्य पालन हुक बुनाई? आधारभूत तरिका
"Vazobral" सस्तो एनालग। analogs सूची "Vazobral"
चिकित्सा 'Euphorbium kompozitum': बयान
रिजर्व उत्पादन को intangible कारक को क्षेत्र मा उत्पादन लागत कम गर्न
उड युग शैली 3: विशेषताहरु। उड युग शैली3- समीक्षा मोडेल
विन्डोज7SSD ड्राइभ अन्तर्गत SSD सेट एक Windows7अपरेटिङ सिस्टम कन्फिगर
सोभियत एयर बलहरु (वीवीएस सोभियत संघ): सोभियत सैन्य उड्डयन को इतिहास